नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, बीमा कम्पनीमा किन झुम्मिए लगानीकर्ता ? – Insurance Khabar
नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, बीमा कम्पनीमा किन झुम्मिए लगानीकर्ता ?
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०९:३४
काठमाडौं, वैशाख ३ । वर्षको दोस्रो दिनको कारोबारमा पनि शेयर बजार सकारात्मक रहेको छ । वर्षको पहिलो दिन सामान्य बढेको नेप्से परिसुचक दोस्रो दिन सोमबार १७ दशमलव ४२ अंकले बढेर १ हजार २ सय ९७ दशमलव ५७ को बिन्दुमा पुगेको छ ।
सामान्य उतारचढावसहित दोहोरो अंकले उकालो लागेको आजको बजारमा आइबतारको तुलनामा कारोबार रकम पनि उच्च अंकले बढेको छ । आइतबार ३० करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको बजारमा यसदिन १६७ कम्पनीको ५७ करोड ६८ लाख ६१ हजार ८६३ रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ ।
आज सबैभन्दा बढी शेयर किनबेच हुनेमा बीमा कम्पनीहरु परेका छन् । सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने दश कम्पनीमध्ये कुमारी बैंक बाहेक सबै बीमा कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड ८१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, गुराँस लाईफको २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ ।
त्यसैगरी नेको इन्स्योरेन्स, नेसनल लाईफ इन्स्योरेन्स, सुर्यालाईफ इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एक करोडभन्दा माथिको शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
निकै लामो समयपछि सुधारको क्रममा रहेको बजारमा समूहका कम्पनीहरुको तुलनमा बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताको चाप देखिएको छ । चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीहरुको हकप्रद आउने क्रममा रहेको र दोस्रो बजारमा छोटो समयमा पनि कमाउन सकिने भएकोले बीमाप्रति आकर्षण देखिएको हुन सक्ने ब्रोकर सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।